Kuboshwe abasolwa ngelokudlwengula | News24
Kuboshwe abasolwa ngelokudlwengula
UMSOLWA owesilisa oneminyaka engu-29, waseNyathikazi, uboshwe ngoLwesihlanu oledlule, ngomhla ka-7 kuMfumfu (October) ngecala lokudlwengula ingane yentombazane eneminyaka engu-11.
Umsolwa uvele enkantolo yeMantshi yaKwaDukuza ngoMsombuluko, ngomhla ka-10 kuMfumfu, kanti ugcinwe ngaphakathi njengoba kulindeleke ukuthi uzofaka isicelo sebheyili ngomhla ka-17 kuMfumfu.
Ngokwamadokodo asenkantolo, kusolakala ukuthi isigameko sokudlwengulwa kwengane senzeka ngenyanga kuNcwaba (August) ekhaya lesisulu.
Amadokodo aqhube ngokuthi isisulu sasisodwa ekhaya ngenkathi kufika umsolwa owaziwa endaweni njengo muntu olungisa izicathulo. Kubikwa ukuthi umsolwa watshela isisulu ukuthi uzolanda izicathulo zikamfowabo wesisulu njengoba wayehlele ukuzi lungisa. Emuva kokuthi isisulu sesimunikezile umsolwa izicathulo kusolakala ukuthi umsolwa yilapho ayidlwengula khona ingane.
Kusolakala ukuthi ingane ibisaba ukubika lesi sigameko ngoba kusolaka ukuthi umsolwa wayisongela ngodlame.
Kwesinye isigameko, owesilisa oneminyaka engu-39 waseShakaville usolwa ngokudlwengula ingane yentombazane eneminyaka engu-11 yakhona endaweni.
Ngokwamadokodo asenkantolo, ngoLwesibili oledlule, ngomhla ka-4 kuMfumfu, unina wesisulu uthe ebuya ekhaya wathola ukuthi ingane yakhe yentombazane eniminyaka engu-11 ayikho ekhaya. Unina ubesebikela amaphoyisa ngengane yakhe elahlekile.
Amadokodo asenkantolo aqhube ngokuthi ntambama ngoLwesine oledlule, indodana kanina wengane okusolakala ukuthi idlwenguliwe ibone usisi wayo, isisulu, komunye umuzi khona endaweni yabe isitshela umama wayo.
Ngenkathi isisulu sitholakala, sitshele unina waso ukuthi umsolwa wasibizela endlini yakhe ngenkathi sizidlalela ngaphandle. Ingane eyisisulu iqhube ngokutshela unina ukuthi ngenkathi ifika endlini kamsolwa yilapho umsolwa ayidlwengulela khona wayisongela ngodlame uma ikeyatshela umuntu ngalesi sigameko kanti futhi ithi umsolwa uyigcinele endlini yakhe yaze yabonwa umfowabo.
Kulindeleke ukuthi umsolwa uzobuyela enkantolo ngomhla ka-17 kuMfumfu.
Owesilisa, oneminyaka engu-29, waseNyathikazi osolwa ngelokudlwengula uzofaka isicelo sebheyili enkantolo yeMantshi yaKwaDukuza ngomhla ka-17 kuMfumfu. Kwelinye icala, owaseShakaville, owesilisa oneminyaka engu-39, naye osolwa ngelokudlwengula uzovela enkantolo ngomhla ka-17 kuMfumfu. Bobabili basolwa ngokudlwengula izingane zamantombazane ezineminyaka engu-11.